मध्यरातमा चौराह देखि क्याम्पसचोकसम्म | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: मध्यरातमा चौराह देखि क्याम्पसचोकसम्म ★ पाण्डव पुजारा★ प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १०, २०७२
लेखक : पाण्डव पुजारा विधा/श्रेणी : संस्मरण रचना संख्या :2प्रकाशन मिति : आइतबार, माघ १०, २०७२ पाण्डव पुजाराका अरु रचनाहरु भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा नेपालीहरू मारमा परेका बेला पुस २ गते महत्वपूर्ण कामकाजका लागि सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल जानु पर्ने भयो । इन्धन अभाव भइरहेको समयमा कसरी जान सक्छु म दिपायल, तैपनि जानै पर्ने भएकाले कर्णाली रिभरसाईड यातायतको शाखा कार्यालयको टिकट काउन्टरमा गएर टिकट माग्दा टिकट उपलब्ध भएन कारण उही थियो, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, टिकट अभाव भएपनि उहिबेला दुइदिन पछिका लागि मुडामा बसेर जाने भनेर मुडाको टिकट काटियो । अर्को गाडबाट तेल झिकेर दीपायलको यात्रा तय गरेरे दीपायल गए । दिपायलको कोमकाज पनि सकियो । अब रह्यो धनगढी पुग्ने भन्ने समस्या, दिनभरि प्याक भएका केही बसहरू आए । तर साझ ८ बजेतिर एउटा टक आयो । टक मै जानु पर्यो भनेर रोकाए । रोकि पनि हाल्यो । दाइ म धनगढी जानुपर्ने हो । बसहरू पनि पाईएन भनेर रिक्वोइस्ट गर्दा मिलाएर बस्लानि दाइ भनेर मैलु म्यानेज गरे । दिउस भरि थकान महसुस भएकाले म सुतेको थाहै भएन । निद्रा गेटा आएर खुल्यो । घडी हेर्दा १२ बजिसकेको थियो । भाइ तिमी त सुत्यौ है भनेर डाईभरले सोध्यो । अ, दाइ अलि थकाई लागेथ्यो हजुहरूको कुराहरू सुन्दासुन्दै सुतिहालेछु थाहै भएन, हजुर कहासम्म जानु हुने हो दाइ ? उसले चटकपुरसम्म मात्रै भन्यो । मैले आफ्नो गन्तव्य स्थान सुनाए पछि उसले चौराहसम्म मात्र जान सक्ने बतायो । ठिकै छ उसैको समस्या बुझे धन्यवाद भन्दै बाहिर निस्किए । मैले दाइलाई फोन गर्न खोजे तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बरमा सम्पर्क हुन सकेन भन्नेपछि मलाई यस्तो अवस्थामा पनि सञ्चार अवरुद्ध किन भएको होला, भन्ने जिज्ञासा उब्जियो । फोन नलागेपछि मैले टकलाई हेरे वाणिज्यभन्दा माथि पुगिसकेको थियो भने मेरो क्याम्पसरोडसम्मको पैदल यात्रा सुरु भयो ।
दिउसो भरी चहल पहल भइरहने धनगढी बजार राति एक बजे सुनसान थियो । एक मनले सोच्दा खेरी मानिसहरू नै नभएको बस्ती जस्तो । मानिसहरूको शुन्य आवज थियो । लाग्थ्यो यो बस्तीमा कुनै मान्छे नै छैन कि क्या हो । अँझ दिउसो भरी मानिसहरूको व्यस्तता देखेर बजार क्षेत्रमा त मानिसहरू सुुतेका पो होलान् त ? कोही नहुने त कुरै भएन नि, आफ्नो मनलाई आफै प्रश्न गरिन्थ्यो । भुस्यहा कुकुरहरू लयात्मक तरिकाले भुकिरहेका थिए । कुकुरले टोक्ने पो हो कि भन्ने बेग्लै डर एकातिर थियो अन्य रात्री लाग्ने डर अर्कातिर थियो । सबै आ आफ्नो घर हिहिसकेकाले मनमनै विभिन्न कुराहरू खेलायर आउदै थिए । यात्रा सेतोपुलसम्म पुग्यो । साल्ट टेडीगं नेर ५० मीटर टाढा भुस्यहा कुकुरहरूको लर्को देखे । कुकुरहरू एक नासले भुकिरहेका थिए । मलाई एका एक डर लागेर आयो । एकातिरबाट भुस्यहा कुकुरहरूको कामै भुक्ने हो भनेर सोचे भने अर्कातिरबाट भुक्ने कुकुर टोक्दैन भन्ने उखान पनि मनमा आईहाल्यो । हिडाईको गति बढाए । शिखर सुजको लगाएको हुनाले आवाज निकै आउथ्यो । त्यसैले त कुकुरहरू मलाई देखेर र आवाज सुनेर भुकिरहेका छन् भन्ने पनि म सोचिरहेको थिए । वह्रयावेहडी देखि कच्ची सडकले मेरो यात्रा बिस्तारै हुन लाग्यो । कस्तो खाल्डा खुल्डी अनि गिट्टी मात्रै फिजेको, अस्ति रिपोटिगं गर्दाखेरी गिट्टी उछिट्टिएर पसलो सिसामा लागेको गुनासो पोख्ने दाइको पसलमा पुगियो । साल्ट टेडिग नेर पुग्ने वित्तिकै फोहरको छेउमा बसेर भुक्दै गरेका भुस्यहा कुकुरहरूको लाइन म कहा आयो । उसै त म कुकुरको भुकाई सुन्ने बित्तिकै डराउने म त्यहाँ नेर डर त लाग्यो नै तर कताबाट साहाससँगै दिमागमा एउटा आईडीया पनि आयो । घरबाट भाउजूले बनाई दिएको रोटी दिउसो खाएको थिए । आधा रोटि बचेको थियो । त्यही आधा रोटि मेरो कुकुरहरूलाई दिने विचार गरे, र कुकुरहरू आफ्नो नजिक नपुग्दै आधाको पनि आधा झिके र उनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरी फाले । कुकुरहरूले खोजी खोजी खाँदासम्म म रातोपुल पुगिसकेको थिए । त्यसपछि मैले आफू भिरबाट खसेर पनि नदुखेको अनुभव गरे र सोचे धनगढी उपमहानगरपालिका भइसक्दा पनि यी भुस्यहा कुकुरहरूको नियन्त्रण कहिले हुने होला । त्यहाँनेर मैले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई दोष दिए । ओमप्यालेस अगाडि पुग्दै गर्दा कैलाली पुलको छेउमा कालो वस्तु देखे जो लामो लठ्ठी आकारको चिज हल्लिरहेको थियो । मनमा डर पलाएर आयो । चिसो महसुस भइरहेका बेला डरले गर्दा चिसो भागेर मनमा एक किसीमको त्रास उब्जियो । के हो यो सोचिरहेको थिए । मैले कोही गुण्डा हो कि भन्ने अनुमान लगाए । हिड्दै गर्दा नजिक नजिक पुगे । त्यो मानिसको नजिकै कुनै बत्ती नभएकाले अँझै यकिन गर्न सकेको थिएन । एक मनले पुलिस हो जस्तो पनि लाग्यो तर उसले ठुलो साउण्डमा लठठी बजायो । अनि मैले राति बजार हेर्ने हेरुवा हो भनेर सजिलै अनुमान लगाए । डर त्रास सबै हट्यो, मन हल्का भयो ।
रातिको साढे एक बजेको त्यो समय ज्याकेट, टोपी लगाएको भएपनि पुसको त्यो चिसोले सुखसँग हिड्न दिइरहेको थिएन । चिसो एकातिर त डर अर्कातिर थियो । लाग्यो, बरु भोलि नै आउनु पर्ने रहेछ । हुन त बस पनि त पाउनु परयो नि भोलि, मनमनै सोचिरहेको थिए । मन लगाएर हिड्ने हो भने यात्रा आधा घण्टाका थियो । तैपनि हिड्न गाह्रो भइरहेको थियो । राती कहिल्यै नहिडेकाले पनि आफू असुरक्षित महसुुस गरिरहेको थिए । मलाई लाग्यो यो समयमा अरु मान्छेहरूले पनि यस्तो अवस्था झेल्नु परेको होला कि, भुस्यहा कुकुर, अनि विभिन्न आकृतिहरूको डर लाग्ने अवस्था थियो । त्यसैबेला सुनसानको पनि डर लाग्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो । हिड्दै थिए, सोच्दै थिए । एलएन चोक पुगेको रहेछु, मैले पुशु कार्यालयको अगाडि नेर आगो बलिरहेको देखे, को होला यति राती आगो बाल्ने भनेर अनुमान लगाए । आगोको रापले नजिकै टोपी, मुखमा माक्स, हतसा, अनि ठुलो ज्याकेट र जुता लगाएको देखिन्थ्यो । एक छिन चोर हो कि जस्तो पनि लाग्यो तर चोर पनि मेन चोकमा आगो बालेर बस्ला त भनेर आफैले आफैलाई प्रश्न गरे । निकै जाडो भएकाले आगो नजिक गए । अहो, यति राति कहाबाट आउनुभयो ? उसले सोधिहाल्यो । मैले सबैकुरा बताए । ऊ पनि राति ड्यूटी गर्ने वाला नै रहेछ । ड्यूटी गर्ने वालाहरू कति छन् भनेर सोध्दा उसले बजार यरियामा मिलाएर राखेका छन् भनेर जवाफ दियो । उपमहानगरपालिकाबाट राखेका रहेछन् पैशा चाहि पसलबाट नै उठाउनु पर्छ भनेर भन्यो ।
दश मिनेटको बसाईपछि उसलाइसँगै जान आग्रह गरे । ठिक छ मेरो त ड्यूटी नै हो भन्दैसँगै आयो । हिड्दै जांदा बाटामा दूख सुखका कुरा गर्यो । जिल्ला प्रशासन अगाडि तीन गाई उभिरहेका थिए । उसले गाईहरू सधैं जसो हुने कुरा बतायो । कहिले दिउसो पनि र राती पनि हुन्छन् भन्दै ऊ एकदिन आफू चढेको गाडी गाइसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएको घटना सुनायो । हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पुगौं । उसले त्योभन्दा अगाडिसम्म जान नसक्ने बतायो । मैले पनि धन्यवाद दिदै अब नजिकै छ, गईहाल्छु भन्दै उसवाट बिदाइ लिए । हल्का अगाडि पुरानो फुलवारी बसपार्क पुग्ने बित्तिकै वत्ति आयो । खम्बाका बत्तीहरू वले । उज्यालो भएजस्तो अनुभव भयो । त्यहानेर एउटा कुरा अँझै मनमा आयो, जलश्रोतमा नेपाल ब्राजील पछिको दोष्रो देश भएपनि किन यत्ति लोडसेडीगं, सायद पुँजिको अभाव भएरै होला भन्ने जस्तो लाग्यो ।
सोच्दै, हिड्दै गर्दा, क्याम्पसचोक पुगे । सोचे समय कति बलवान हुन्छ । यो सानो दुई घण्टाको समयमै ईतिहास वन्छ । कल्पना गरे अब यो समय दोहारीयला त ? साहित्यसंसार नेपाली साहित्यको सानो संसार « यस अघिको पोस्ट
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : संस्मरण: खिच्न नसकेको फोटो हनी पफ संस्मरण : युद्दभूमी इराकको यात्रा छालमा रुझेकी उ नाब्रानमा गर्मी याम – सागओल अजरबैजान छोक सागओल दोस्तलार मेरो प्यारो ओखलढुंगा सम्झनामा मेरा अग्रज,गाँउ,स्कुल र बालसखा नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com